Rare 'cave squeaker' frog returns after decades without a sighting
Zimbabwean President Robert Mugabe’s supporters said today they spent around €220,000 to celebrate his 86th birthday.
ZIMBABWE yesterday slipped deeper into crisis as the death toll from a cholera epidemic neared 500 and members of President Robert Mugabe’s armed forces were accused of taking part in a looting spree.
Arts award a morale boost for outspoken Zimbabwean playwright
ZIMBABWEAN playwright Cont Mhlanga, who has challenged President Robert Mugabe’s rule throughout his career, has been awarded a new prize celebrating the role the arts can play in promoting human rights.
Mugabe's militant's halt opposition rally
Opposition officials accused ruling party militants of preventing the Movement for Democratic Change from holding a rally today, a day after a court lifted a ban on opposition rallies.
Zimbabwe opposition rallies in Harare
Zimbabwe’s opposition will hold rallies in the capital Harare today thanks to a favourable court ruling with only weeks to go before its leader faces Robert Mugabe in a presidential runoff.
Mugabe turns up heat on Tsvangirai
Just three weeks before the runoff election, Zimbabwe’s president Robert Mugabe is giving the opposition no room to manoeuvre – harassing and threatening to arrest its candidate, banning its rallies and attacking diplomats who try to investigate political violence.
Police stamp out Tsvangirai's election campaign
Police stopped the election campaign of Robert Mugabe’s main rival in its tracks today.
Police stop Tsvangirai from attending rally
Police have today prevented Zimbabwe's main opposition leader from reaching an election campaign site.
British and US officials held at Zimbabwe roadblock
British and US diplomats were attacked as they tried to investigate political violence in Zimbabwe today in an operation blamed directly on president Robert Mugabe.
Tsvangirai resumes campaigning after police detention
Zimbabwe’s opposition presidential candidate has resumed campaigning today after spending nine hours in police detention in the country’s second main city.
Police release Zimbabwean opposition leader
An opposition party official says police have released the Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai.
Zimbabwe police hold Tsvangirai
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai was being held by police after being stopped at a roadblock today.
Zimbabwe election 'heading for re-run'
Zimbabwe’s presidential election is increasingly likely to be decided by a second round of voting, it emerged today.
Mugabe a beaten man, says presidential rival Tsvangirai
Zimbabwe’s main opposition leader is insisting that he has won presidential elections outright and is not negotiating to ease out Robert Mugabe, who has led Zimbabwe from liberation to ruin.
Opposition claims early lead in Zimbabwe's election
Zimbabwe’s main opposition party has claimed an early lead in elections and says it is leading the presidential race against Robert Mugabe with 67% of votes.
Zimbabweans queued for hours today to vote in elections that present President Robert Mugabe with his toughest political challenge in 28 years in power.
Mugabe vows to pray for Archbishop named in adultery case
Zimbabwe President Robert Mugabe said he would pray for Roman Catholic Archbishop Pius Ncube, an outspoken government critic named in an alleged adultery case.
Mugabe threatens critics with ‘full wrath of the law’
ZIMBABWEAN President Robert Mugabe threatened yesterday to bring down “the full wrath of the law” against anyone who disturbs peace and stability.
Mugabe threatens critics with 'full wrath of the law'
President Robert Mugabe threatened in a speech today to bring down “the full wrath of the law” against anyone who disturbs Zimbabwean peace and stability.
18 killed in Zimbabwe bus crash
Two buses crashed into each other on a Zimbabwean bridge today, killing 18 people.
Amnesty film reveals Zimbabwe slum horror
Amnesty International today released new secretly-filmed footage from Zimbabwe revealing the “desperate plight” of people it said were made homeless by the government’s slum clearance policy.
Mugabe defends ruthless crackdown on urban 'trash'
Zimbabwe’s President Robert Mugabe defended the eviction of tens of thousands of informal traders and shack dwellers from city streets as a clean-up drive, and a two-day strike against the campaign got off to a slow start.
Mugabe defends township 'clean-up campaign'
A two-day general strike got off to a slow start today with most Zimbabweans seemingly heeding police warnings not to participate in the protest against the forced removal of tens of thousands of informal traders and shack dwellers from city streets.
Zimbabwe general strike has limited success
A two-day general strike called to protest a government crackdown on the urban poor began slowly today with a heavy police presence on the streets of Harare.
Zimbabwe police arrest 9,600 street vendors
Paramilitary units armed with batons and tear gas patrolled Harare’s main roads today as police said they would tolerate no more protests against their crackdown on street trading – the only livelihood for thousands in Zimbabwe’s shattered economy.
President Robert Mugabe of Zimbabwe arrived in Rome to attend the funeral of Pope John II, sidestepping a European Union travel ban because it does not apply to the Vatican.
Mugabe defies EU sanctions to attend Pope's funeral
President Robert Mugabe defied a European Union travel ban and flew from Zimbabwe unannounced to join world leaders attending Pope John Paul II’s funeral in Rome, state radio announced today.
Opposition starts to question leadership
ZIMBABWE’S fractured and frustrated political opposition is starting to question whether its leader, Morgan Tsvangirai, can bring down President Robert Mugabe and his ruling ZANU-PF party.